China 2021 elu arụmọrụ vetikal ụdị kwụsiri ike arụmọrụ Raymond igwe igwe na-emepụta na suppliers | MG
Aha ngwaahịa: Raymond igwe igwe
Ụdị moto: China ama ama akara CE Certificate AC moto
Nhazi: Nri nri, ihe na-ama jijiji, igwe igwe igwe, akụkụ mkpokọta ntụ ntụ, onye na-anakọta uzuzu
Mgbakọta ike: 60-180KW
Agba igwe igwe: Agba ọcha, agba beige ma ọ bụ ahaziri
Uru: Factory kpọmkwem, mma nkwa, ogologo ndụ oge
Akụkụ: 5650*3305*5950 mm
Ụdị kwụ ọtọ Raymond igwe igwe igwe
Nkọwa nke igwe igwe igwe Raymond
Zhengzhou MG Brand Raymond igwe nri, nke a makwaara dị ka raymond grinding, raymond roller Mill na raymond grinder, dị mma maka ịkwanye ihe ndị na-adịghị ọkụ na ndị na-enweghị mgbawa. Enwere ike ịhazi nha ntụ ntụ n'etiti 30 na 425 mesh (0.613mm-0.044). mm).
Ihe igwe nri Raymond dabara adaba maka usoro dị iche iche ịnweta enweghị ọkụ nke dị n'okpuru ike Mos asaa, mmiri dị n'okpuru 6%, dị ka nkume nzu, calcite carbonate, dolomite, barite, talc, gypsum, diabase, quartz, bentonite, bauxite, iron ore, wdg.
Usoro nka nke igwe igwe igwe Raymond:
Oke nri kacha (mm)
Nha mmepụta (mm)
Ike nke isi etiti(kw)
Ụkpụrụ ọrụ nke igwe igwe igwe Raymond:
1. The dum Ọdịdị nke Raymond Mill igwe bụ tumadi gụnyere onye ọbịa, analysis igwe, plumbing fixtures na blower, dị ka onye ọrụ mkpa, ọ nwere ike kwadebere na crusher, mbuli elu, electromagnetic vibrating feeder, electric akara kabinet wdg.
2. Mgbe ihe anuahade ka chọrọ urughuru size, banye nchekwa hopper site mbuli elu, na mgbe ahụ site vibrating feeder banye-egweri ụlọ nke Raymond igwe nri edo nọgidere.
3. N'ihi ike centrifugal mgbe ọ na-agbagharị, ndị na-agbagharị agbagharị na-apụ apụ, na-agbanye na mgbanaka na-egweri, shọvel agụba scoop ihe, wee ziga ha n'etiti igwe na-egweri na mgbanaka na-egweri, n'ihi na-agbagharị roller roller rollers na-akpụ akpụ iji nweta nzube nhịahụ.
4. Mgbe egweri ihe, ntụ ntụ tinyere ikuku na-ekesa nke ikuku na-eme, na-ebute n'ime igwe nyocha maka nhazi, ihe na-adịghị mma ga-atụgharị. ntụ ntụ tozuru oke yana ikuku na-abanye n'ime ngwaahịa cyclone ntụ ntụ na-anakọta, wee wepụ tube ntụ ntụ, nke emechara.
5. Na-egweri ụlọ nke Raymond igwe nri, n'ihi na e nwere ụfọdụ mmiri na-egweri ihe, mgbe egweri, ọ ga-n'ịwa okpomọkụ, mmiri evaporates, na ọkpọkọ interface nke dum adịghị uko, n'èzí ikuku na-adọta n'ime-eme ka nrụgide mgbasa ozi mụbara iji hụ na igwe igwe wok n'okpuru nrụgide na-adịghị mma. Igwe ikuku na-abawanye na-abanye n'ájá site na duct, n'ikpeazụ banye na ikuku mgbe emechara ya.
Njirimara nke igwe igwe igwe Raymond:
1, Cambered shọvelụ agụba na-agbanwe agụba, ọzọ ịrụ ọrụ nke ọma na ndị ọzọ mmezi na-eri azọpụta
2, ikwu na omenala integral shọvelụ agụba, anyị na-anakwere kewara ụdị shọvelụ agụba: mgbe ịcha akụkụ yi, naanị agụba mkpa ka dochie, nke na-ezere ihe n'efu n'ihi nnọchi nke integral shọvelụ agụba, na ukwuu na-enyere ndị ahịa aka ịzọpụta. ngbanwe ego nke ngwa ngwa-eyi akụkụ. Tụkwasị na nke ahụ, usoro nhazi nke anyị nakweere nwere ike iduzi ihe ahụ na ihu kwụ ọtọ, akụkụ elu, etiti na nke ala nke igwe na-egweri na mgbanaka na-egweri nwere ike niile na-egweri ma na-eyi uniformly; ọ na-abawanye mpaghara ọrụ dị irè ma na-eme ka nrụpụta mmepụta ihe.
3, Elu-arụmọrụ onu ụdị ntụ ntụ separator nwere ike n'ụzọ dị irè kpochapụ "keadighi rarii ntụ ntụ wụfuru"
4, MTW European trapezoid ntụ ntụ igwe na-anabata ụdị ụdị ntụ ntụ dị elu nke dị elu, nke dị n'ọhịa siri ike, nnukwu ntụ ntụ na-ekewapụta nkenke, nnukwu ntụ ntụ na-ekewapụta arụmọrụ na dayameta ziri ezi; na mgbakwunye, a na-anakwere akara pneumatic n'etiti ụlọ na rotor cage, nke nwere ike kpochapụ ihe omume "na-agbapụta ntụ ntụ".
5, Thin mmanụ lubrication usoro na-eme ka nnyefe na ọrụ ọzọ kwụsie ike
6, The omenala igwe nri lubricating ụdị bụ griiz lubrication, nke ga-eme ka nnukwu lubrication iguzogide, elu okpomọkụ ịrị elu na mkpumkpu ibu ndụ; MTW European trapezoid ntụ ntụ igwe na-anabata mgbapụta mmanụ dị n'ime, nke nwere ike ịghọta mmanu nke ibu ihe na-ebu isi na bevel pinion shaft na-enweghị mgbakwunye mmanụ dị iche iche ma ọ bụ ọdụ mmanụ.
7, Nguzogide na-enweghị ikuku oriri volut imewe na-aghọta smoother tangential airflow na mma ihe onwunwe liquidity
8, N'ọnụ ụzọ nlele nke ikuku oriri volute nke omenala igwe nri, n'ime ime elu nke n'ime ọnụ ụzọ mpempe akwụkwọ bulges apụta, na-adịghị kwekọọ na esịtidem elu nke ikuku oriri volut, nke bụ n'ihi na n'ịwa eddy mmetụta na dịkwuo usoro ike oriri. . Maka igwe ihe igwe MTW European trapezoid powder, ihe dị n'ime ime mpempe akwụkwọ na ikuku ikuku dị n'otu elu ahụ, nke nwere ike zere mmetụta eddy nke ọma, belata ụda ikuku, ma melite oke ihe onwunwe.
Ebe a na-arụ ọrụ igwe igwe igwe Raymond
Raymond igwe nri bụ ezigbo igwe maka egweri barite, limestone, mica, talcum, quartz, calcite, konkiri, poselin ụrọ, basalt, gypsum, ọla edo, ígwè ore, bauxite, ọla kọpa, ciment, coal wdg Ya mere o nwere obosara ngwa na ntụ ntụ ime. ụlọ ọrụ na-ewu ụlọ, Ngwuputa na-emepụta akwụkwọ na ihe ndị ọzọ.
Anyị nwere ike ọ bụghị naanị na-enye ndị ezi igwe, ma na-eji obi dum na-enye keukwu maka anyị ahịa. Usoro ọrụ teknụzụ ọkachamara ga-eme ka ị nweta ahụmịhe ngwaahịa dị mma.
Nkwado ọrụ mgbe-ahịa
Zhengzhou MG anọwo na-anabata teknụzụ ọhụrụ, usoro ọhụrụ na ngwa teknụzụ dị elu. Na MG nwekwara usoro njikwa mma siri ike ma dị irè. Anyị nwetara ISO9001: 2000 àgwà usoro akwụkwọ.
Anyị na-ekwusi ike ịnye ndị ahịa ihe ngwọta n'ozuzu site na nkwanye akụrụngwa ruo nbibi na ntinye, ọzụzụ ndị ọrụ, nkwado teknụzụ na mmezi.
Mbupu na mbupu igwe igwe igwe MG Raymond
1. Kedu igwe ị chọrọ?
dị ka nkume egweri, igwe ihe igwe ma ọ bụ igwe ihe igwe, wdg.
2. kedu ihe bụ atụmatụ akụrụngwa gị iji hazie?
dị ka nkume nzu, granite ma ọ bụ marble ore, wdg.
3. Ikike ị chọrọ.
Dị ka ụda 100 kwa elekere ma ọ bụ ụda 2000 kwa ụbọchị.
4. Ozi kọntaktị gị.
Ma email na nọmba ekwentị dị mkpa, anyị nwere ike ịkpọtụrụ gị mfe.
Nke gara aga: MG atọ Cylinder Rotary Sand Dryer
Osote: Teknụzụ kacha ọhụrụ nke China zuru osisi ngwa agha mgbidi putty
Igwe igwe nkume nkume
10-30T Ceramic Tile Adhesive Ime igwe kpọrọ nkụ ...
2021 China New Technology Full akpaaka akọrọ Mo...